Södertäljemålet:Maxkamadaytiin abad ugu qaalisaneyd dalkaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Södertäljemålet:Maxkamadaytiin abad ugu qaalisaneyd dalkaan
La daabacay onsdag 25 juli 2012 kl 16.57
Keyska maxkamadeed ee loogu waco Södertäljemålet kaas oo labaatameeyo nin lagu maxkamadeenayey magaalada Södertälje, ayaa noqonaya maxkamdeyntii abad ugu qaalisanaynad dalkaan Iswedhen. Qaneerada iyo dadka matalaya dhibanayaasha keyska ayaa iskugeeyn dalbaday 70 milyan oo koron oo ah gunooyinka gacanta ay ka geysteen baaaritaanka keyska.
- Maxkamadeyntaan waxa ay kamid tahay kuwii ugu qaalisan abad ee dalkaan ka dhacay inta aan anigu garanayo, dadka la maxkamadeeyey oo aad u badan iyo keyska oo maalmo badan qaatay ayaa kalifay in qarashaadku cirka isku shareeraan, ayey tiri Magdalena Carlén oo u qaabilsan golaha maxkmadaha dhanka dhaqaalaha.
Qareenada iyo dadka dhibanayaasha matalayey ayaa gadaal si qiyaas ahaan u sooo diro howshii ay qabteen islamarkaana soo gubiya gunooyinka ay doonayaan.
Kowda augusta ayey maxkmada Södertälje soo saari doonta go'aankeeda keyska, hadana waxaa loo gudbiyey maxkmada dhamaan dalabyada qarashaadka. Qaar kamid ah qareenada dadka la maxkamadeynayo ayaa howsha loo dhiibay dayrtiida 2010, kadib markii booliska ay soo qabteen rag lagu tuhunsanaa dilka labo qof oo ka dhacay Ronna centrum kalub ku yaalo oo lagu ciyaaro ciyaaraha kontrobaanka ah. Halka qareenada qaar howsha gadaal ugu soo biireen kadib markii dadka la qabtay ay bateen oo baahida qareenado sidoo kale badatay.
Laanta wararka ee Ekot ayaa u kuur gashay dhamaan dalabyada qarash ee maxkamada loo gudbiyey, qaar kamid ah dalabyada ayaa midkiiba ku dhowyahay afar milyan oo koron. Qarashaadka ugu badan waxa uu ku baxay aqrinta iyo ka baarandegida macluumaadka keysaska iyo weliba waraysiyada iyo wada xaajodka ay qareenado la yeesheen eedeysanayaasha. Qaar qareenada kamid ah ayaa ayaguna dalbaday gunooyin dheeraad ah taas oo u dhiganta kordhitaan dhan sadex meelod qarashka caadiyan ku baxda saacadii. Qareenada yaana taa ku micneeyey in keyskaaan uu ahaa mid aan si aan caadi ahayn u baaxad weyn.
Fredrik Ungefält waxa weeye mid kamid ah qareenada kuwooda dalbatay gunooyinka ugu badan . Waxa uuna qareen u ahaa nin lagu tilmaamay in uu hormood u yahay shabkada burcadaa ee Södertälje ka jirta.
- keyskaan waxa uu qaatay dhamaan waqtigayga oo dhan ilaa bartamihii augustigii hore wax howla ah oo kale oo aan qabtay majirto oo aan ka ahayn in aan diyaariyo difaacida eedeysanaha aan matalayey, ayuu yeri Fredrik ungerfält.
Balse Magdalen Carlén oo ka howla-gashqa domstolsverket ayaa waxay aaminsantahay in keys maxkamadeed oo ay ku baxdo 70 milyan oo koron aysan ahayn wax caadiya.
- keysasyada ugu waaweyn caadiyan qarashaadka ku baxaa waxa uu udhaxayn jiray 20 ila 50 milyan ayey tiri. Lakiin maxkamada Södertälje ayaa haysata fursad ay gorgortan kaga geli karto qarasha si ay hoos ugu dhigto, inkastoo aysan gudoomiyaha maxkamada Katarina Ekholm ay ka gaabsatay in ay ka hadasho wax ku saabsan keyska södertäljemålet inta ka horaysa maalinta arbacada soo socoto oo la filayo in maxkamdo go'aankeeda soo saari doonto.
Warbixintaan waxaa laanta waraka ee ekot u diyaareyey Simon Andén ana afsoomali ayaan ku soo koobayey.